ပူလို့အိုက်လိ်ု့နေစရာ ရှားလို့.....
ဪ .. နွေရောက်ပြီလေ နွေအပူ လေအပူ နေရခက်လှပါပေသမို့အီဖေစကိုယ် မှာ အေးရာအေးကြောင်း ရှာမိပါတယ် ။
အသွားမတော် တလှမ်း ၊ ကိုယ့် မှာတော့ အလျှောမတော် တချက်နဲ့ တင် အသက်ထွက်ရပါလေပြီ။
( မြွေတကောင်၏ နောက်ဆုံး တမ်းခြင်း )
ခုတလော ရာသီဥတု ကလည်း ပူသထက် ပူပြင်း ၊ ပထဝီ ကမ္ဘာ မြေကြီး ကလည်း အစွမ်းကုန် အပူငွေ့ တွေ တင်း ၊လူသားတွေတင် နေရခက်ခြင်း မဟုတ် ။ ကိုရွှေ မြွေ လေးခမြာ လည်း နေရခက်လှ ပေသမို့အေးရာ အေးကြောင်း ရှာမိပါတယ် လေ ။
ထိုင်ဝမ် ကျွန်းနိုင်ငံလေးရဲ့ နယ်မြေ အပိုင် ဖုန်ဟူ မြို့ လေး က ပိုပြီး ရာသီဥတု ပြင်းထန်တတ်တယ် ။ ပင်မကျွန်းကြီးထက် ပူရင် ပိုပူ ၊ အေးရင် ပိုအေးတယ်ပေါ့ နော်။
ဒီနေ့ မနက် က သတင်းတပုဒ် ကြည့် လိုက်ရတော့ အူတွေ အသည်းတွေ ရှိရှိသမျှ ယားသွားလို့ စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေမောင်နှမ များပါ အေးအတူ ပူအမျှ အတူတကွ ခံစား နိုင်ရလေအောင် မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ် ။
ဖုန်ဟူမြို့အရံ ရဲ တပ်ဖွဲ့ မှ ဒု ရဲမှူး မစ္စတာ ချိုက် ဆိုသူ ဟာ တနေ့ ည ပိုင်း အလုပ်ဆင်း အိမ်ပြန်လမ်းမှာ သူ့ အရှေ့ လမ်း မပေါ်မှာ မြွေတကောင် ဖြတ်သွား တာကို အမှတ် တမဲ့ လျှစ်ကနဲ မြင်လိုက်လို့ရပ်လိုက်စဉ် မှာ ဒီမြွေဟာ လန့်ပြီး သူ့ ဆိုင်ကယ်ဘီးအောက် ဖြတ်တက်တာ သိလိုက်တယ်ပေါ့ ။ နောက်တော့ ဒီမြွေ ကဘီးမှတဆင့် ဆိုင်ကယ်ရှေ့ ဖုံးထဲ ဝင်သွားတာလေ ။ သူ့ အထင်တော့ ဆက် မောင်းလိုက်ရင် ဒီအမြီးရှည် ကောင် ပြုတ်ကျ ကျန် ခဲ့ မယ် ထင်ပြီး ဘာမှ ဆက်မလုပ်တော့ဘဲ အိမ် အပြန် ခရီး ဆက်လာပါတယ် ။ နောက်တော့ မှ သူ့ လက်မှာ အေးစက်စက် အထိအတွေ့ခံစားလိုက်ရမှ ကြည့်လိုက်တော့ ဘယ်ဘက် လက်ကိုင် ဘရိတ် တန်းမှာ သကောင့်သား က ခေါင်းပြူ ထွက် နေတာတွေ့ ရတယ် ။
( အံမလေး ကိုယ်သာဆို နေရာတင် မှာ မူးမေ့သွားလောက်တယ် ။ မြွေဆိ်ု ရွံကြောက်ကြီးလေ ၊ဒီလောက် အနီးကပ်ကြီး ရုတ်တရက် မြင်လိုက်ရတာ ဆိုတော့ ..) ။
ဒီလူ ကတော့ ရဲ မို့ လို့ လား မသိ ၊ သတ္တိ ရှိ စွာ နဲ့ ပေါ့ ( ဒီနိုင်ငံ မှရဲ စိတ် ပြည့် ဝသော ရဲများကို ဆိုလိုပါတယ် နော် ) ။ အိမ်ထိဆက်စီးလာလိုက်သေးတယ်တဲ့။ သူ့ ဟာသူ သွားပါ စေ ဆို ပြီး မေတ္တာ ထားတာ လည်း ပါ မှာပေါ့ ။
နောက်တနေ့ မနက် မိုးလင်းတော့ သူ့ ဆိုင်ကယ် ဆီ ပြန်လာ အကြည့်မှာ တွေ့ ရတာ က အမြှီးရှည်ကောင် မျက်ဖြူ ဆိုက်နေပြီ လေ ။ ဆွဲထုတ်လို့ ကလည်း မရတာ နဲ့ဆိုင်ကယ်ပြင်တဲ့ ဆိုင်ကို သွား ပြီး ရှေ့ဖုံးကို တစ စီ ဆွဲ ဖြုတ် ပြီး မှ ကြည့်တော့ သနားစရာ ကို မြွေလေး အသက် မရှိ တော့ပါဘုး ။ အလာကောင်း ပေမဲ့ အခါနှောင်း သွားတယ် ပေါ့ကွယ် ။
ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ဒီ အမြှီးရှည်ကောင် က လူတရပ်စာ မက ရှည်ပါတယ် ။စက်ကြားထဲ ။ ဘီးကြားထဲ ညှပ်ပြီး အသက် ထွက်ရ ရှာတာပါ ။
သတ္တဝါ တခု ၊ ကံ တခု ပေ ပဲ ပေါ့ ။
သို့ ပေသော်လည်း ကိုယ့် မှာတော့ အခု ဆိုင်ကယ် မောင်းတော့မယ်ဆို ဒီပုံ ထဲ က အရိပ်က ဘယ်လောက်ကြာအောင် လိုက်ခြောက် နေမယ်မှန်း မသိသေးလို့။ ။ ။ အမေရေ ကယ်ပါအုံး ။။။
သတင်းဖေါ်ပြချက်အရ ဒီမြွေဟာ Elaphe carinata အမျိုးစုဝင် ဖြစ်ပါတယ် ။ ၂၆၅ စင်တီမီတာ ရှည်ပါသတဲ့ ။ သူများကို တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာ အမြီးပိုင်းမှ အလွန်ဆိုးဝါးသော အနံ့ တမျိုး ထွက်စေပါတယ်တဲ့ ..တခြားသတ္တဝါတွေ နဲ့ သူတို့အချင်းချင်း ကို မြို နိူင် ပါသတဲ့.. စပါးကြီးမြွေ ပေါ့ နော်..
ဟိဟိ အသေးစိတ်တော့မရေးတတ်တော့ဘုး။ စိတ်ဝင်စားရင် ဒီနေရာ မှာ ဆက်ဖတ်ပါနော် .. .
:kiki : at 6/30/2009 06:30:00 PM
ဒေါက်တာ ရမ်းကု ။
စိတ်တွေ ရှုပ်နေလိ်ု့ငယ်ငယ်တည်းကကြိုက်ခဲ့တဲ့သမိန်ပေါသွပ် ကာတွန်းလေးတွေ ပြန်ရှာဖတ်ဖြစ်တယ် ။
ရှင်းရှင်း လေး နဲ့ အူတက်အောင် ရယ်ရတဲ့ ကာတွန်းပုံလေးတွေ ကြည့် ရတာ စိတ် ရှုပ် သက်သာသွားတယ် ။
အတွေးတချို့ တော့ ကျန်ခဲ့ တယ်ပေါ့ ။ ဗြဲ ၊။း((
အဲလို လူမျိုး ၊ ရမ်းကု ကြီးနဲ့ တကယ် တွေ့ ခဲ့ ဖူးတာ ပြန် အမှတ်ရမိပါတယ် ။
ဒီကို ရောက်ခါစ မအူ မလည် ခေါ် ရမလား ၊အူကြောင်ကြောင် ဆို ရမလား ၊ ဟို မရောက် ဒီမရောက် ကြားကာလ တခု
မှာပေါ့နော်။ မြန်မာပြည်က လာတဲ့ စီနီယာ နောင်တော်ကြီး မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဆေးရုံတခု ၊ နယ်မြို့ လေးတနေရာ က
ကိုယ်ပိုင်ဆေးရုံ တရုံမှာ အလုပ်သွားလျှောက် ၊ အင်တာဗြူး ပြီးတာ နဲ့ ချက်ချင်းအလုပ် တက်နိုင်မလားတဲ့။
ဪ ငါတော့ ရေကန် အသင့် ကြာအသင့် ပါလားလို့အထင်တခွဲသား နဲ့ နောက် တရက် က စပြီး
အလုပ်စလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ။ ဆေးရုံက ၆ ထပ် ရှိပေမဲ့ လူနာ လည်း သိပ် မရှိလှပါဘူး ။အဲဒီ ဆေးရုံအုပ်ခေါ်ရမလား ။
သူဌေးခေါ်ရမလား ။သူကိုယ်တိုင်က ဆရာဝန် ပါဘဲ ။ အသက် ၇၀ လောက် ရှိပြီ ။ ဒါပေမဲ့ သူရေးတဲ့ ဆေးစာတွေ
ကိုယ်လဲ တလုံးမှ မဖတ်တတ် ၊ စာလုံးတွေ က ရုတ်တရက်ကြည့် ရင်တော့ အင်းဂလိပ်စာလုံးတွေ လို ပါဘဲ ။
နောက်မှ သိတာ ဂျာမန် စာတွေ တဲ့ လေ ။
( ဟဲ ဟဲ .. ခု ဒီစာကို ဖတ်နေတဲ့ သူ တွေထဲ ဂျာမန်စာ တတ်တဲ့ချစ်မမ ကြီး တယောက် ပြုံး မနေနဲ့ အုံး နော် ) ။
နောက်မှာရော အပေါ်မှာရော ဝတ်စ၂လုံး ပေါက် ပါတာတွေလည်း ရှိပ ။ အဲဒါမှ ပြသနာ ၊ လူနာ မှတ်တမ်းတွေ
ဖတ်ရတာလည်း နားမလည် ။ဆေးနာမယ်တွေ ရေးတာလည်း တမျိုးကြီးတွေ ။( အဲဒီအချိန်က ခုနေလို နေရာတကာမှာ
ကွန်ပူတာ တွေ မသုံးကြသေးပါဘူး ။ )
ဒါနဲ့ သူ့ အထာ ကို သိအောင် ဆေးရုံမှာ သုံးသမျှ ဆေးတွေ အားလုံး လိုက်ကြည့်၊ ရေး ၊ မှတ် ရတာပေါ့နော် ။
ဒီလောက် က အကြောင်းမဟုတ်ပါ ။တပါတ်လောက် နဲ့ အိုကေသွားတာ။ဂျာမန် စာကြီးတတ်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဘယ်လိုရေးထားရင် ဘာဆေးလည်း ဆို တာလောက် လေး သိသွားရုံပါ ။
နောက် တပါတ်ကျော်တော့ ခွဲခန်း စဝင် ခိုင်းတယ်လေ ။ ခွဲစိပ် အကူပေါ့ ။ ခွဲခန်း သီရေတာ ထဲရောက်တော့
အသားညိုညို ၊ နှာခေါင်းမွေး ထူလပြစ် နဲ့ ဆရာဝန် တယောက် တွေ့ တယ်၊
( အပြင်မှာတွေ့ ရင် ဘယ်သူမှ ဆရာဝန် ထင်မယ် မဟုတ်။ လူကြမ်းမင်းသား ပုံစံမျိုးကြီးလေ ) ။
သူ့ ကို ကူညီရမယ်ပေါ့ ။ ဒီတော့လည်း ထုံးစံအတိုင်း လက်ကို စင်အောင် ဆေးရည်အထပ်ထပ်နဲ့ 
ပွတ်တိုက်ဆေးကြော သန့် စင်ရတာပေါ့နော် ။ ပြီးတော့ ပိုးသတ်ထားတဲ့ ဝတ်ရုံကြီးစွပ် ။ ခေါင်း ၊ မျက်နှာ။လက်
စွပ်စရာ ရှိတာ စွပ်ပေါ့ ။အဲဒီ ဆရာဝန် ဆိုတဲ့ လူကြီးကတော့ လက်လည်းသေချာဆေးတာ မတွေ့ ပါဘူး ။
ကဲ လေ ထားပါတော့ ။ သူ့ လက်က သန့်ပြီး သားလို့ ထင်နေပုံ ရပါတယ် ။သူလည်း ဝတ်ပြီး စွပ် ပြီးတော့
ခွဲစိတ်ခုံမှာ လဲလှောင်း မှိန်းနေတဲ့ လူနာရဲ့ညာဘက်မှာနေရာယူတော့ ။ အကူရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း ကိုယ်က သူ့ ရဲ
့မျက်နှာချင်းဆိုင် မှာရပ်ပေါ့ ။ စပြီးခွဲ ပါပြီ ။ လူနာက မှတ်မှတ်ရရ အမျိုးသမီး လူလတ်ပိုင်း ။ အူအတက်ယောင်တယ်
ဆိုပြီး ခွဲ ခံရတယ်ပေါ့ ။ ခွဲ တာ အဆင့်ဆင့်တော့ မပြောတော့ပါဘူး ။ အတိုချုပ်လိုက်ရင် ခပ်ကြမ်းကြမ်း
အကိုင်အတွယ်တွေနဲ့ ခွဲစိတ်မှု ပြီးဆုံး သွားပါတယ် ။ ထူးခြားချက် က ခွဲခန်းထဲ မှာ မေ့ဆေးဆရာ မတွေ့ ပါဘူး ။
လူနာကလည်း မှိန်းသာနေတာ ၊ တချက် တချက် နာရင် ညီးသံထွက်လာတယ် ၊ ဗိုက်ထဲက အူခွေလေး တချို့ 
ဖေါင်းကား ပြီး ရှိတဲ့ အပေါက်လေးကနေ ပြူတစ်ပြူတစ်လုပ်ပြတာကလည်း မကြာခဏ ။
အဲဒါကို လိုက်ဖိ နေရတာ က အလုပ်တခု ။အူအတက်ကို ဖွင့်တဲ့ ခွဲရာက ၄ လက်မ စာလောက်ကြီးရှိတာကိုး ။
ဒီလိုနဲ့ ဘဲ ရုန်း၍ ကန်၍ ရင်ဆိုင်၍ တပွဲ ပြီးခဲ့ ရတယ် ။ နောက်မှ သိရတာ သူက လူနာကို မေ့ဆေး ကိုယ်တိုင်ထိုးပြီး
ခွဲတာ တဲ့ လေ ။ ဒီလို ကေ့စ်မျိုးကို G.A( တကိုယ်လုံး မေ့ဆေး ) ၊ ဒါမှ မဟုတ် S.A( ခါးရိုး ကနေ ထုံဆေး သွင်းခြင်း)
နဲ့လုပ်သင့်တာပေါ့ ။ ကဲ လေ ထားလိုက်ပါတော့ ။ သူ့ အရပ် နဲ့ သူ့ ထုံးစံ ၊ ကိုယ်နဲ့ ဘာဆိုင်တာ မှတ်လို့။
ဒါပေမဲ့လူနာ က ညီးလိုက် ၊ အူက ပြူတစ် လိုက်နဲ့ စိတ်မချမ်းသာ ပါဘူး ။ဒီလူနာ ၂ရက်ကျော်ပြီး လေမလည်သေးလို့
ဆေးတောင့် အကူအညီနဲ့ မှ လည်ရတာလေ ။ကံမကောင်းတာ ကတော့ နောက် ၃ရက်မြောက်မှာ အနာရင်း ပါလေရော ။
ဖျားတယ် ။ဒီတော့မှ ဒီဆရာ နဲ့သူဌေး ခေါင်းချင်းရိုက် ကိုယ် နားမလည်တဲ့ စကားတွေနဲ့အချေအတင်
ပြောကြ ပြီး ပဋိဇီဝ ပိုးသတ်ဆေးတွေ ဘုံးဘော လအော သုံး ရတော့တာဘဲ ။ တော်သေးတာပေါ့
လူနာ အသက် မထွက်သွားတာ ။
ပြီးတော့ ဒီလူကြီးက အိုပီဒီ လည်း ထိုင်တယ်ပေါ့ ။ ဝတ်ထားတာကလည်း စမတ် ကျကျ ။ စကားကလည်း
အပြောကောင်းနဲ့ သူ့ လူနာတွေ မနည်းလှ ပါဘူး ။
ဒီလိုနဲ့ ၂ ပါတ် အတွင်း ခွဲခန်းထဲမှာ ၃ကြိမ် ဆုံဖြစ်တယ် နောက် ၂ခု ကတော့ အရိုးကျိုးလို့စတီးချောင်းထည့်
တာတွေပါ ။အရိုး ဆိုတော့ ကြမ်းချက်က ပို တာပေါ့လေ ။
နောက်တော့ သံသယ နဲနဲ ဖြစ်လာတာ သူက ဘယ်တော့ မှ လူနာ မှတ်တမ်းထဲ မှာ မရေးဘူး ။ ပါးစပ်နဲ့ ဘဲ ပြောတယ် ။
သူ့ အကြောင်းသိတဲ့ ဆရာမလေးတွေ ကတော့ သူ့ ကို ပြန် ခံပြောကြတာလည်း သတိထားမိတယ် ။
နောက်ဆုံး မနေနိုင်တော့ မှ နဲနဲလေး ရင်းနှီးစ ပြုလာတဲ့ ဆရာမလေးကို တိုးတိုးတိတ်ိတ် မေးမိပါတယ် ။
နောက် ၂ ရက် နေတော့ ကိုယ်လည်း အဲဒီ ဆေးရုံကနေ အလုပ်ထွက်စာ တင်ပြီး ထွက်လာ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။
အကျိုးအကြောင်း သိချင်ရင် ပြောပြပါမယ် ။ ဆက်ဖတ် ပါ ။ မသိချင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ဤ နေရာတွင် ဇာတ်လမ်း တပုဒ်
ဖတ်မဲ့ သူတွေ က စိတ်ထဲ ကျိန်ဆဲ ချင်ကျိန်ဆဲနေကြမယ် ။ပြောမဲ့ဟာ မပြောဘုး ၊ လေရှည်နေသေးတယ် လို့ လေ ။
ဒီလို ကွဲ့ဒီလို ။
အဲဒီ ဆရာဝန် ဆိုတဲ့ လူကြီးက ဘယ် ဆေးတက္ကသိုလ် မှာမှ ဆေးပညာ ကို အမှန်တကယ် သင်ယူခဲ့ဖူးတဲ့ သူ
မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ ဆေးရုံတွေ အတော်များများမှာ လူနာ ဆေးထဲ့၊ ခွဲခန်းထဲ လိုတာ ဝင်ကူပြီး
မြင်ထားတာမှတ်သမျှ ကို တတ်ယောင်ကားနဲ့ လုပ်ရင်း ကြာတော့ တကယ့် ဆရာဝန်ကြီးသဖွယ် လုပ်စား နေတာတဲ့ လေ ။
ဒါကြောင့် အင်းဂလိပ်လိုဆေးစာတွေ ဆေးမှတ် တမ်းတွေ သူ မရေးတတ်တော့ ပါးစပ် အော်ဒါ ပဲ ပေးပါသတဲ့ ။
အင်း သူ လို ရမ်းကုကြီး ခိုင်းတာ လုပ်ခဲ့ ရတဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် စိတ်ထဲ အတော် ကသိကအောင့်
ဖြစ်မိလိုက်သေး ။ သူ ကံကောင်းနေသေးလို့ဘာမှ မဖြစ်သေးတာ ၊ ကိုယ် ကံမကောင်းတဲ့ အချိန်
ကိုယ့်အပေါ်မှာ အမှုပတ်မှာ တွေးမိလို့ ၊ ကံသိပ် မဆိုးသေးမီ အမြန်ပြေးခဲ့ ရကြောင်းပါ ။
ဒီက ဥပဒေ အရ လိုင်စင်မရှိဘဲ ဆေးကုရင် ထောင် ၇ နှစ်ထိ ချနိုင်ပါကြောင်း ။အဲလို ရမ်းကုလိုက်လို့လူနာ
သေသွားရင်တော့ လူသေမှုနဲ့ အပြစ်ပိုကြီးမယ်ပေါ့။
ခုဆိုရင်လူနာ စောင့်လုပ်မဲ့ သူတောင် သင်တန်းတက်ပြီး လက်မှတ်ရှိမှ လူနာစောင့် အလုပ်ကို တရားဝင်
လုပ်ကိုင်ခွင့် ရှိပါသတဲ လေ ။
ဪ ... ရမ်းကု ရမ်းကု
အရာရာ အတုတွေ များနေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲ ဆေးတု ရယ် ။ ဆရာဝန်တုရယ် တွေ့ ရင် ထွက်မဲ့အသက် ကတော့
အတုမဟုတ်နိုင်ပါဘူး ။ အသက် စစ်စစ်ကြီး က အမှန်တကယ် ထွက်ရ ရှာမှာ ပါ။
နောက်ထပ်ရမ်းကု ဇာတ် လမ်း တပုဒ် ရှိပါသေး တယ် ။ဒါကတော့ သတင်းတွေထဲမှာ တွေ့ မိ ဖတ်မိတာပါ။
သူ့ ကြောင့် ခု နောက်ပိုင်းမှာ သြစတြေးလျ နိုင်ငံမှာ သွားရောက် အလုပ် လုပ်လိုသူ ဆရာဝန် တွေကို အစိုးရ က
တင်းတင်းကြပ်ကြပ် စစ်ဆေး ၊ စာမေးပွဲ အဆင့်ဆင့်ဖြေဆို အောင်မြင် ပြီးမှ သာ တရားဝင် လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးပါ
သြတြေးလျ နိုင်ငံ ကွင်းစ်လန်း ပြည်နယ် ရှိ Bundaberg ခေါ်တဲ့ဆေးရုံ မှာ ၂၀၀၃ မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အတွင်း
တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့တဲ့ဆရာဝန် Dr Jayant Patel ဆိုသူ ဟာ တော့ သေမင်းဆရာဝန် ( Doctor Death )
လို့နာမယ်ကြီးခဲ့သူ တယောက်ပါ ။ သူ အဲဒီ မှာ ရှိနေစဉ် ခွဲစိတ် လူနာ ၁၂၀၂ ဦးမှာ ၈၇ ဦး သေဆုံးခဲ့ ပါတယ် ။
နောက်မှ တာဝန်ကျ ဆရာမ တဦး က သင်ကာမကင်း ဖြစ် ၊ စုံစမ်းမှ သူ့ နောက်ကြောင်း ရာဇဝင် သေချာ
သိခဲ့ ကြပါတယ်တဲ့သူဟာ အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှာ ဆေးပညာ သင်ကြားခဲ့ ပြီး ၁၉၈၄ မှာ အမေရိကန် နိုင်ငံ
နယူးယောက်မြို့ သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချခဲ့ ပါတယ်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ အော်ရီဂွန်( Oregon) မြို့မှာ အလုပ် လုပ်နေစဉ် ခွဲစိတ် လူနာ ၄ ယောက်မှာ ၃ ယောက် သေဆုံး
ခဲ့ ရတယ် ။ နောက်ပိုင်းတော့ အဲဒီ နှစ်နယ် စလုံး မှာ သူ့ ရဲ့ အလုပ်လုပ်ခွင့် ဆရာဝန် လိုင်စင်ကို အစိုးရက
ပိတ်ပင် ခဲ့ ရပါတယ် ။
နောက်တော့ သူ့ကို ပြစ်မှုကျူးလွန်တာထင်ရှားတဲ့အတွက် တရားရုံး ကထောင်ဒါဏ် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ် ။
အသေးစိတ် သိချင်ရင်တော့ ဒီ နေရာ တွေ ၁ ၂ွမှာ ဆက်လက် ကြည့် ရှု နိုင်ပါတယ်။
:kiki : at 6/29/2009 01:00:00 AM
ဒီနေ့အလုပ်နားတယ်.. တပတ်မှာ တရက်ဘဲ ရှားရှားပါးပါး နားရတဲ့ အချိန်လေး ။အိမ်မှာအေးဆေးနေပါလား လို့အဝေးက ညီမငယ်လေးက ပြောဖူးတယ် ။ ဒါပေမဲ့ရီးဆပ်စ် မျောက်သွေး အပိုတွေ ပါနေတဲ့ ကိုယ်တယောက် ဘယ်လို မှ အိမ်မှာ ကပ်နေလို့မရ ။ အပြင်လေးတော့ ထွက်လိုက်ရ မှ လေ ။ များသော အားဖြင့် တနင်္ဂနွေ နေ့ တိုင်း မနက် အိပ်ယာထ . စားသောက် ။ရေမိုးချိုး အဝတ်စားလဲ ပြီး တနေကုန် လမ်းသလားတယ်
အလှ အပ ကတော့ နဂို ချောပြီးသားဆိုတော့ ဘာမှ အထူးအထွေ ပြင်စရာ မလိုလှပါဘူး ။ ကျောက်ကျော ရေပက်ထားတာတောင် ဒီလောက် ချော မယ် မထင်ပါ ။
ဒါပေမဲ့ကိုယ့်မှာ ဇီဇာကြောင်တတ်တဲ့ အကျင့်တခု ဖျောက်မရတာ။ အဝတ်အစားလဲမယ် ၊ ဝတ်မယ်ဆိုရင် မီးပူ ထိုးပြီးသား အနံ့ လေး သင်းနေမှ ကြိုက်တယ်လေ ။အရင် တုံးကတော့ မိဘအိမ်မှာ အပူအပင်မရှိနေရတုံးက အကျီင်္ ဆိုလဲ မီးပူတိုက်ပြီးသား အဆင်သင့် ။ ခုကျတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အားလုံး အစအဆုံးလုပ်နေရတာ ။ ( ဒီက တရုပ်မတွေများ တယ် အပျင်းကြီးကြတာ ။ တချို့ များ ရုပ်လေးကြည့်တော့ သနားကမား ။ ဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီအဝတ် အစား က တွန့်ကျေမွလို့ ။ဘယ်တော့မှ မီးပူ မတိုက်ဘဲ ဝတ်ကြတဲ့ သူတွေ အများကြီးနော့ ။ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ အဝတ် အစားမှ မီးပူတိုက်ရမယ်မှန်း မှတ်နေကြလား မသိ ။ အဝတ်လျှော်စက်နဲ့ လျှော်ပြီးထွက်လာတဲ့ အဝတ်တွေဟာ သိတဲ့ အတိုင်း တွန့် ကျေနေတတ်ကြတာလေ ။မလှန်းခင် သေချာ ခါပြီး လှန်းတာတောင် တွန့် ရာတွေက ရှိနေတတ်သေးတာမို့ လား .. ကဲ ဇာတ်လမ်းလေးပြန်ဆက်မယ်)
ပြီးတော့ ဟဲန်းဖုံး ။ အဲဒါကလဲ ယနေ့ ခေတ် လူတွေရဲ့မရှိ မဖြစ် အသုံးအဆောင် တခု ဖြစ်နေကြပြီနော် ။ မူကြို ကလေး တွေ က အစ ။ ၉၀ ကျော် သက်ကြီး တွေ အထိ အရေးကြီးတဲ့ ဆက်သွယ်ရေး တန်ဆာပလာ တခုပေါ့ ။
အဟက် ။။ ဒီလို နဲ့ မီးပူ တိုက်ရင်း ဖုံးလာရင် ထ မကိုင်ရလေအောင် ...အဲလို အဆင်ပြေပြေလေး လက်တကမ်း မှာ ထား မိလိုက်ရင်တော့ .. ဖုံး ခေါ်သံ မည် လာတဲ့ အခါ မှာ ဒီင်္လို မျိုး ပြသနာ တက် နိုင်ပါတယ် ။
အားလုံး သတိပြု ကြပါနော် ။ စေတနာ နဲ့ ပြောနေတာပါ ။ ကိုယ်တွေ့ မှ ယုံကြည်တတ်သူများ စမ်းသပ်ကြည့် ကြပါလေ ။
ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ ကြပါစေ . ..း)
ဘေးဘယာ ဝေးကွာကြပါစေ ...း)
:kiki : at 6/27/2009 01:00:00 PM
ကြယ်ကြွေချိန် မှာ .....
အတ္တ ၊ မာန ယှဉ်ပြိုင်စိတ်နဲ့ 
အိပ်မရတဲ့စိတ္တဇည တွေ
ငါ့ အကြည့် ဝေဝေက
ကြယ်စင်တွေ ဆီမှာပေါ့ ။
တနယ် တမြေက ချစ်သူရေ
ငါမင်းကို လွမ်းနေပါလို့ 
ရင်ခုန်သံ တမ်းတတာမို့ 
အဓိပ္ပါယ် သေချာ ရှာမတွေ့ ပါဘူး။
ပျော်လာသလို စိုးထိတ် သလို
ပင့်သက်ရှိုက်လို့ဆုချွေခဲ့
ညတွေမှာ ကြယ်မကြွေပါစေနဲ့ 
ငါ့ရင်မှာ နေစေချင်ပါရဲ့ ။
(မောင်လေး ကြယ်ရောင်လင်းရဲ့ခံစားချက်လေးများ ကို ဖြည့်စွက် ခံစား ရေးသား ပါတယ် ။
ဝေဒနာ တူ ညီနေကြ တာမို့အမှတ် တရလေး အဖြစ်ပါ )
:kiki : at 6/26/2009 12:00:00 AM
မနာမကျင် ကာကွယ်ဆေး .....
ဆေးထိုးဖို့ဆို လူတွေ အတော်များများကြောက်တတ်ကြပါတယ် ။ ဆေးထိုးအပ် ဘယ်လောက် သေးသေး အပ်မြင်ရုံနဲ့ လန့် နေတတ်ကြတဲ့ သူတွေ မနည်းပါဘူး ။ ( ဆေးထိုးမှ ရောဂါပျောက်တယ် ထင်တတ်ကြတဲ့ တချို့ သူတွေကလွဲ ရင်ပေါ့လေ ၊)
တချို့ ကလေးငယ်များဆိုရင် ဘယ်လောက်များ လည်သလည်းဆိုတော့ ဆေးရုံထဲ ဝင်လိုက်တာနဲ့။ ဂျူတီကုတ် ဖြူဖြူ ဆရာဝန် ရှေ့ရောက်တာနဲ့ ကိ်ု အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ငိုတတ်ကြတာ ရီရမလို ။သနားရမလိုနဲ့ လေ ။
ကလေးငယ်များအတွက် သူ့ အသက်အရွယ်အလိုက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေး မျိုးစုံ ရှိကြတယ် ။များသော အားဖြင့် ဘီစီဂျီ ခေါ်တဲ့တီဘီ ကာကွယ်ဆေး ။ အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး ၊ ဒီပီတီ ခေါ် ဆုံဆို့ နာ၊ကြက်ညှာ၊ မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး ။ ဂျပန် ဦးနှောက် အမြှေးရောင် ကာကွယ်ဆေး ၊ နမိုးနီးယား အဆုပ်ယောင် ကာကွယ်ဆေး အစရှိတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေကို နိုင်ငံအလိုက် ။ အသက်ရွယ် အလိုက် မဖြစ် မနေ ထိုးကြရပါတယ် ။ အစိုးရ ကျန်းမာရေးဌာန တွေက တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ပေးလေ့ ရှိကြတဲ့အခြေခံ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု တခုထဲမှာ အပါအဝင်ပေါ့ နော် ။
ပိုလီယို အကြောသေရောဂါ ကာကွယ်ဆေး မှာ အစက်ချ ဆေးရည် တိုက်ရတာက လွဲရင် ကျန်တဲ့ ဆေးတွေက အသားဆေး အဖြစ်ထိုး ကြရတာလေ ။
ဆေးထိုးအပ်နဲ့ ထိုး တယ် ဆိုတော့ အနည်းနဲ့အများ နာကြတာချည်းပါဘဲ ။တခြားဖြစ်တတ်တာကတော့ အထိုးခံရတဲ့ နေရာ မှာ အဆင်မသင့်ရင် ယောင်ရမ်းတယ် ။ အကြိတ် အခဲ ဖြစ်တယ် ။ ပိုးဝင်တတ်တယ်ပေါ့ ။
ခုဆိုရင် ကမ္ဘာ့ ပထမ ဦးဆုံး အနေနဲ့ တီထွင်မှု တမျိ်ုးကို ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ ပစိဖိတ် အိုးရှင်း တက္ကသိုလ်မှ တွဲဘက် ပရော်ဖက်ဆာ ဝူကျန်းကျယ် (海大副教授吳彰哲 ) ဆိုသူက ပြုလုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဆေးထိုးအပ်နဲ့ ဆေးထိုးစရာမလိုဘဲ ပလာစတာလေး ကပ်ရုံ နဲ့တင် ၊ မနာမကျင် နဲ့ တူညီတဲ့ အာနိသင် ကို ရရှိစေတဲ့ကပ်ဆေး ကာကွယ်ဆေး တမျိုး ဖြစ်ပါတယ် ။
လောလောဆယ် ဖေါ်ထုတ် ပြုလုပ်ထားတာ ကတော့ ဂျပန် ဦးနှောက် အမြှေးရောင် ( Japanese Encephalitis - J.E ) အတွက် ကာကွယ်ဆေး တမျိုးပါ ။
အဲဒီဆေးကို ထိုးဖို့ မလိုဘဲ အဖြူရောင် လေးထောင့်ပလာစတာ လေးကို သန့် စင်တဲ့ အရေပြား ပေါ်မှာ ၂ နာရီကြာမျှ ကပ်ထားရုံပါဘဲ။
ဒီဆေးထဲ က DNA ဓါတ် တမျိုးဟာ အရေပြားထဲ စိမ့်ဝင်သွားပြီး ပရိုတင်း ဓါတ် တခု အနေနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ခုခံအား Antibody ထွက်ရှိစေပြီးနောက် ဘေလုံးနဲ့သားငံကြိတ် တို့ မှာ ကာကွယ်ခုခံမှုတွေ ဆက်ဖြစ်စေပါတယ် ။
အဲဒီ ဆေးပလာစတာ လေးကို နောက် ထပ် ၃ ပါတ် အကြာမှာ တကြိမ် ထပ်ကပ် ပေးခြင်း အားဖြင့် ၊ ကာကွယ်ဆေး ၄ ကြိမ် ထိုးပေးရတဲ့ခုခံစွမ်းအားမျိုးနဲ့ တူညီတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု ရရှိ စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ပလာစတာ ကပ်ဆေးလေးတွေ ကို အခန်းအပူ ချိန်မှာ ဘဲ ထိန်းသိမ်း ထားရှိနိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲ သို့ မဟုတ် အအေးဓါတ်နဲ့ ဆေးသိုလှောင်ရတဲ့အပို အလုပ်ရှုပ်တာတွေလည်း နဲသွားပါမယ်။
( မီးမမှန် ၊ မီးမရှိတဲ့ရွှေပြည်ကြီးအတွက် အသင့်လျှော်ဆုံးပေါ့နော် ) ။ ပြီးတော့ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်ကျ စရိတ်ဟာလည်း ထိုးဆေးထက် တဝက်မျှ သက်သာ ပါတယ် တဲ့။
နောက်နောင်ဆိုရင် တခြားရောဂါ ကာကွယ်ဆေးများ ဆက်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားလျှက် ရှိပါတဲ့ အကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ် ပါတယ်။
နောက်ဆို မနာ မကျင် ကာကွယ်ဆေးတွေ ပေါ်လာတော့မှာမို့လူသားတွေ အတွက် အကျိုးပြုတဲ့တီထွင်မှုလေးပါ ။
(ကိုယ်တို့ ရွှေပြည်ကြီးက များစွာသော ကလေးများအတွက် ဒီလို တီထွင်မှုလေးတွေ လျှင်မြန် များပြားစွာ ပြုလုပ်ပေးနိုင်မဲ့ပြည်တွင်းဖြစ် အတတ်ပညာ ရှင်များ ပေါ်ထွန်းနိုင်ပါစေ လို့.... )
တရုပ်လို ဖတ်လိုသူများအတွက် အော်ရီဂျင်နယ် လေးက ဒီအောက် မှာပါ။ :)
TVBS 更新日期:"2009/06/24 22:55" 張嘉男
ဆေးလိပ် ဖြတ်လိုသူများအတွက် အလားတူ ပလာစတာ ကပ်ဆေး များ ကတော့ အသုံး ပြုနေကြတာ ကြာ ပါ ပြီ ။
သိလိုသူများ စုံစမ်းနိုင်ပါတယ် ။ :)
:kiki : at 6/25/2009 02:02:00 AM
ကြံ့ရယ် ၊ ဖွတ် ရယ် ဒီလို သဘောထားကြ ပါတယ်
ရန်ကုန် က ဆောက် လက်စ အဆောက် အဦ တစ်ခု ပေါ်မှ အုတ်ခဲ တစ်လုံး လမ်းသွား တစ်ဦး. ခေါင်းပေါ်သို့ တည့်တည့် ကျသည်၊
ဒဏ်ရာ ပြင်း၍ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံး သွားသည်၊
လူအုပ်ကြီး ၀ိုင်းလာ ကာ တစ်ယောက် တစ်ပေါက် မကျေမနပ်ပြောကြသည်၊
“လမ်းတောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် လျှောက်လို့မရတော့ဘူး ”
“တာဝန်ရှိသူတွေက ဒီအတိုင်း ကြည့်နေတော့ မှာလား။”
“ပြည်သူတွေ အတွက်လည်း စဉ်းစားကြပါအုံး၊”
ထိုသို့ ပြောဆိုနေစဉ် လူအုပ်ကြားမှ လူတစ်ယောက်က “သူ့ကိုကျနော် ကောင်းကောင်း သိတယ်ဗျ။ ဒီလူ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းက လူတစ်ယောက်ဘဲ။”
လူအုပ်ကြီးထဲမှ မကျေနပ်သံများ ပို၍ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်လာတော့သည်၊
“အဲဒီကြံ့ ဖွတ်တွေ လွန်ကို လွန်လွန်းတယ်။ ဘယ်သွားသွား သူတိုချည်းပဲ။ အခုကြည့်လေ အုတ်ခဲတောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကျဖို့နေရာ မရှိဘူး၊”
သတင်း ထောက် တယောက် ဆောင်းပါး ရေးရန် လမ်းပြ နှင့် အတူ လူ သားစား လူရိုင်း များ နေထိုင် ရာ ဒေသ ကို ရောက်လာ သည်၊၊
လမ်းပြ က ပြောလိုက် သည်။ “ရှေ့မှာ ထမင်း ဆိုင် ရှိတယ်။ ထူးထူး ဆန်းဆန်း ဟင်း တွေ ရ တတ်တယ်၊”
သတင်းထောက်ဆိုင်ထဲဝင်လိုက်သည်၊ ကောင်တာရှေ့တွင် ကြော်ညာသင်ပုန်းတချပ် ထောင်ထားသည်။
> ဆရာဝန်ဦးနှောက် ၅၀ သား -------------------၅၀၀၀ ကျပ်
> ရှေ့နေဦးနှောက် ၅၀ သား ---------------------၆၀၀၀ ကျပ်
> ကျောင်းဆရာဦးနှောက် ၅၀ သား --------------၇၀၀၀ ကျပ်
> ကြံ့+ ဖွတ် ဦးနှောက် ၅၀ သား-----------------------၄၀၀၀၀ ကျပ်
သတင်းထောက်က တအံ့တသြမေးမိသည်။ “ကြံ့+ဖွတ်ဦးနှောက်က တော်တော်စားကောင်းသလား။”
မြန်မာစကားတတ်သော ဆိုင်ရှင်က ၀င်ဖြေလိုက်သည်။
“မဟုတ်ပါဘူး၊ ၅၀ သားပြည့်ဖို့ ကြံ့ဖွတ် တွေ အများကြီး သတ်ရလို့ပါ၊”
စာရေးရမှာ အနည်းငယ် ပျင်းရိ နေပါ၍ forward mail လေး တခု ထဲမှ ရယ်စရာ ဟာသလေး ကို
ဆား+ ငပိ + ငံပြာရည် ရော ပြီး မကျက် တကျက် ချက် ထားပါသည် ။
သွေးတိုး ရှိသူများ နှင့် အလာဂျီ ရှိသူ များ ရှောင် ကွင်း ၍ သွားကြစေလို ပါသည်။
:kiki : at 6/23/2009 11:39:00 PM
ရှိတော့ ရှိတယ် ရှားတယ် ။
တနေ့ က သီတင်းစာထဲ တွေ့ တဲ့ သတင်းလေးတပုဒ်ဖတ်ပြီး စိတ်ထဲ အတော်လေး ပီတိဖြစ်မိပါတယ် ။
များသော အားဖြင့်နေ့ တိုင်းလိုလို အနိဌာရုံ တွေ ။ အ မင်္ဂလာ သတင်းတွေဘဲ မြင်နေရ ရာ မှ ဒီသတင်းလေးကြည့်ပြီးလူတယောက် နဲ့ တယောက် အမြဲ ဒီလိုချစ်ခင် မြတ်နိုး နိုင်ကြရင် ဘယ်လောက်များကောင်းလိုက်လေမလည်းလို့ စဉ်းစား မိပါတယ်။ လင်နဲ့ မယား လျှာနဲ့သွား ဆိုသလို အစဉ်မသင့်တဲ့ တခါတလေ မှာ ကိုက်မိ ..အဲ ..ကတောက်ကဆ လေးများ ဖြစ်လေ့ ရှိတာလည်း သဘာဝ ပါဘဲ ။
ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့ တယောက် ချစ်ခင် မြတ်နိုးကြမယ် ၊ နားလည် ခွင့်လွှတ် တတ်ကြမယ် ၊ အပေးအယူ မျှတကြမယ်ဆိုရင် ဒီ အိမ်ထောင် တခုဟာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ စရာ တွေနဲ့ရည်ရှည် တည်တံ့ နိုင်မှာပါ ၊။
အဲလိုမှ မဟုတ်ကြဘူး ။ တယောက်နဲ့ တယောက် မြတ်နိုး ယုံကြည်မှု မရှိဘူးဆိုရင်တော့ နောက် ကြာလေ ပြသနာတွေ ၊ မကျေနပ်မှုတွေ နဲ့အ စိုင် အခဲ ကြီးမားလာပြီး နောက်ဆုံး အိမ်ထောင်ရေး ပျက်စီးခြင်းများ ဖြစ်လာတတ်တာ လေ ။
အခု ပြောပြချင်တဲ့အိမ်ထောင်လေးတခု မှာ လင် နဲ့ မယား တို့အသက် ပေး ချစ်ခင် ကြပုံလေးတွေ တွေ့ ကြရမှာပါ ။
ဒီတခါ ကတော့ စိတ်ကူးယဉ် ပုံပြင်လေး မဟုတ်ပါဘူး ။ တကဲ့ အဖြစ်အပျက် ၊ ရှိတော့ ရှိတယ် ၊ ရှားတယ် ဆိုတဲ့ အထဲ ကပေါ့ ။
ဒီဇာတ်လမ်းမှ မင်းသား နာမယ်က ချန်လုန်ထုန် ၄၈ နှစ် ။ သူ့မိန်းမ က ၅၂ နှစ် ပါ ။ ခုဆို အိမ်ထောင်သက် ၁၄ နှစ် ။ သားသမီး မထွန်းကား သေးပါဘူး ။ယောင်္ကျားက စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီကြီးတခုမှာ တာဝန်ယူရတယ် ၊၊ မိန်းမ ကတော့ အစိုးရ ဆေးရုံကြီး တခုမှ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်း တဦးပါ ။
၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ သူတို့ နှစ်ဦး တောင်တက် အဖွဲ့ တခု မှာ ပါဝင်ရင်းနဲ့စတင် သိကျွမ်းခဲ့ကြတယ်တဲ့။
နောက် ၂ နှစ် အကြာ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့ ကြတယ် ။လက်ထပ်ပြီး နောက် တနှစ်အကြာမှာဘဲ မိန်းမမှာ ကျောက်ကပ်ယောင်တာ အရင်းခံပြီး သွေးတိုးရောဂါ စတင် ခံစား ရပါတယ် ။
နောက်ထပ် ၄ နှစ်အကြာ မှာတော့ ၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာ မိန်းမ ဟာ သွေးတိုးရောဂါ ကြောင့် ဦးနှောက်မှာသွေးထွက်ပြီး လေဖြတ်တယ် ။ ကျောက်ကပ်လည်း တစ တစ ပို ပျက်စီးလာခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ မစ္စတာ ချန် ဟာ သူ့ ရဲ့ဘယ်ဖက် ကျောက်ကပ်ကို သူ့ မိန်းမ အသက်ဆက်ရှင် နိူင်အောင် ပေးလှူ ခဲ့ ပါတယ် ။
( ညာဘက် အပေါ်ပုံလေးကတော့ လင်မယားနှစ်ဦး အမေရိကန်ပြည်သို့အလည်ခရီးထွက်ခဲ့စဉ်အခါက ။
အောက်ဘက် ဘယ် ပုံလေးကတော့ သူ့မိန်းမ အတွက် ချက်ပြုတ်ပေးနေတဲ့ ပုံလေးပါ )
၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ သွေးအန်ပြီးဆေးရုံတက်ရာမှ သူမ ဟာ အသည်းမာကျွတ်ခြင်းရောဂါ ဖြစ်နေကြောင်း ဆရာဝန်ကြီးတွေကပြောခဲ့ ပါတယ်။ အစားအသောက်ကို လည်း အစာချေဖျက်လွယ်ပြီး အဟာရ ဖြစ်မဲ့ အရာတွေသာ စားသုံးဖို့အကြံပြုတာကြောင့် မစ္စတာ ချန်ဟာ အဲဒီ အချိန်မှ စပြီး ထမင်းဟင်းချက် တာ ကို အထူးကြိုးစားသင်ယူပြီး သူ့ မိန်းမ ကို နေ့ တိုင်း ဂရုတစိုက် ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေး ပြီး ပြုစုခဲ့ ပါတယ် ။
၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ မှာ ရောဂါပိုးဝင် သွေးဆိပ်တက်ပြီး သူမရဲ့အသည်းဟာ လုံးဝ နီးပါး ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ် ။ အသည်း ကို အရေးတကြီး အစားထိုးလဲလှယ် မှု မပြုလုပ်နိုင်ဘူး ဆိုရင် သူမဟာ ၂ နှစ်ထက် ပို ပြီး အသက်မရှည် နိုင်တော့ဘုးလို့ဆရာဝန် တွေက ပြောပါတယ် ။
အဲဒီအချိန်မှာတော့မစ္စတာ ချန် ဟာ သူ့ ချစ်ဇနီး ရဲ့ အသက်ကို ကယ်ဖို့ အတွက် သူ့ ခန္ဓာကိုယ် ထဲ က ကောင်းမွန်တဲ့ အသည်းရဲ့၆၀% ကို ပေးဆပ်ခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီလို ကြီးမားတဲ့ အချစ်သက်သေ အတွက် ဒုတိယ အကြိမ် ခွဲစိပ်ခြင်းကို ၂၀၀၈ ခု နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ခရစ်စမတ် အကြို နေ့ မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါတယ်။
( ပထမ အကြိမ် မှာ သူ့ ရဲ့ ဘယ်ဘက်ကျောက်ကပ် ကို သူ့ မိန်းမ အတွက် ပေးခဲ့ ပုံ နှင့် ဒုတိယ အကြိမ် မှာ သူ့ အသည်း ရဲ့၆၀ ရာခိုင်နုန်း ကို သူ့ မိန်းမ အတွက် အစားထိုး ပေးခဲ့ တဲ့ပုံ )
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ မှာ သူတို့ လင်မယား နှစ်ဦးစလုံး ကျန်းမာစွာ ဆေးရုံ ဆင်းကြရပြီး
ပျော်ရွှင်ဘွယ်ရာ တူနှစ်ကိုယ် တိုင်းပြည်လေးကို စိတ်တူကိုယ်တူ ဆက်လက်တည်ဆောက် နေထိုင် နေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဪ .. ဒီလို ချစ်မေတ္တာ တရားနဲ့ အချစ်ကြီးတဲ့ သူ ...ဤကမ္ဘာကြီးမှာ ရှိတော့ ရှိနေကြပါသေးသည် ။ သို့ သော် ရှားပါသည် ။
ချစ်သော ဘလောဂါ မမ ၊ ညီမ ၊ တူမ ၊ မြေးမ လေး များ လည်း ဤသို့ သော ရှားရှားပါးပါး အဖေါ်မွန် လေးများ တွေ့နိုင်ကြပါစေ ဟု ဆုတောင်း ပေးပါသည် ။
( အမြဲတမ်း ယောင်္ကျား မကောင်းသတင်းများ တင်ပြနေ ၍ အကျွန်ုပ် အား အထင် အမြင်စောင်းနေသူများ ပြန်လည် တည့်မတ်စွာ မြင်နိုင်ပါစေရန် လည်း ရည်ရွယ်ပါသည် ။ မှန်တာပြော လင်ကောင်း သားကောင်း ရ ပါ စေ လို့။း))
:kiki : at 6/22/2009 09:15:00 AM
အိုး မိုင် ကစ်စ်........
တနယ်စီခြား နေသော ချစ်သူ စုံတွဲများ အတွက် ရည်ရွယ် ထားသည့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း တမျိုးကို ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ ပညာရှင်များ က ရှာရှာဖွေဖွေ ဖန်တီး ထုတ်လုပ် လိုက်သည်။
Kiss p့hone ဟု အမည် ပေးထားသည့် အဆိုပါ မိုဘိုင်းလ် ဖုန်း တွင် လူ့ နှုတ်ခမ်း သဏ္ဍန် စုပ်ခွက် ကြီးတစ်ခု ပါရှိပြီး ထို စုပ်ခွက် မှ တဆင့် အနမ်းခြွေ လိုက်ပါက တစ်ဖက် မှ ချစ်သူထံသို့ ထိုအနမ်းကို လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင် ပေးနိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ထို့အတွက် ချစ်သူ နှစ်ဦးလုံး တွင် Kissphone တစ်လုံးစီ ရှိနေရန်တော့ လိုအပ်သည်။ ထိုနှုတ်ခမ်းပုံ စုပ်ခွက်ကြီးများသည် အာရုံခံစနစ် တပ်ဆင်ထားပြီး တစ်ဖက်မှ နမ်းလိုက် သည့် အနမ်း ၏ စုပ်ယူအား၊ အပူချိန်ပမာဏ၊ သက်ရောက်သော ဖိအား တို့ကို စနစ်တကျ မှတ်တမ်း တင်ကာ တစ်ဖက် တွင် ထို အနမ်း အတိုင်း ပို့ဆောင် ပေးကြောင်း သိရသည်။
အနေဝေး နေသည့် ချစ်သူချင်း ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ချစ်ခင် ထိတွေ့မှုရရှိ စေလိုသော ရည်ရွယ်ချက် ဖြင့် ယခု ဖုန်းကို ဖန်တီး ခဲ့ကြောင်း ထိုဖုန်း ကို တီထွင်သူ ဂျော်ဂျက်ကူဆိုရော က ရှင်းလင်း ပြောဆိုသွားပြီး ထိုဖုန်း ကို အသုံးပြုပါက ဖုန်းနံပါတ် မှားမခေါ်မိရန် သတိထားသင့်ကြောင်း အရွှမ်းဖောက် ပြောကြား ခဲ့သည်။
( သူငယ်ချင်းတယောက်ပို့ ပေးသော မေးလ်မှ ပြန်လည် ဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ပေါက်ပေါက်နှင့် ငပိချက်ပါသည်။ )
ဟဲ ဟဲ ။။ အလိုရှိသူများ မှာကြားနိုင်ပါသည်။ Wii ထက် ပို၍ အသုံးတည့် ပါသည် ။
မမေတ္တာရောင်ပြန် အတွက် အထူးလျှော့ဈေး S $ 1500 ဖြင့် ပေးပါမည်။
ပတ်ချွဲ နှပ်ချွဲ မျောက်မူးလဲ မောင်ဖိုးစိန် အတွက် အထူး တက်ဈေး( တချိန်တည်း တွင် မိန်းကလေး အယောက် ၅၀ ကို တပြိုင်တည်း ချွဲ နိုင်ရန် central remote system ဖြင့် အထူး စီမံ ၍ ကုမ္ပဏီ မှ ဂျောက်ဂျက်ကူဆိုရော က ဦးဏှောက်စားခံ ထုတ်လုပ်ထားရ ပါသဖြင့် ) ဒေါ်လာ ၁သိန်းခွဲ ကျမည် ဖြစ်ပါသည်။
ချစ်သူကို အရမ်းကြီးချစ်တတ် ကြ သူ ညီမလေး မေလေး နင့်အကေးရှား အတွက် မေတ္တာလက်ဆောင်ပေးပါမည် ။ သို့ သော် ထိုသူ တိ်ု့ သည် ဤဖုံး ဖြင့်သူမ တို့၏ ချစ်သူအား တနေ့ လျှင် အကြိမ် ၂၀၀၀၀ အာဘွားပေးပါမည် ဟု ဂတိပေးရမည် .
ရန်ဖြစ်နေကြ ချစ်သူ စုံတွဲ များ အတွက် ... ပါးရိုက်+ နှုတ်ခမ်းရိုက် လုပ်နိုင်ပါသည် ၊
2 in 1 ဈေး နှုန်း မှာ အနည်းငယ် ပို ပါသည် ။ 1500+ , ပါးတခါချ 2$ + , နှုတ်ခမ်း တခါချ 3$ ကို လပေး
ဖုံးကြေး အပေါ် ထပ်ဆင့် ပေးရမည်ုဖြစ်ပါသည်။
မချစ်ရ ဆိုသူ များ နှင့်မသက်ဆိုင်သောကြောင့် ဤ ဖုံး ကို အသုံး ပြုခွင့် မရှိပါ ။
ကိုယ်စားလှယ် ယူလိုသူများ အမြန် ဆက်သွယ် နိုင်ပါသည်။ ၂၀၀၉ လိပ်တက် မောဒယ် ဖြစ်ပါသည်။
အမှန်အကန် သုံးစွဲ သူများအတွက်သာ ရောင်းချ ပေးမည်ုဖြစ်ပြီး အကျင့် စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံစာ လို အပ် ပါသည် ။ အကြံအဖန် လုပ်လိုသူ များ သုံးစွဲ ပါက ကစ်စ် မရဘဲ ပါးရွဲ့သွားနိုင်ကြောင်း ကြိုတင် သတိပေး အပ်ပါသည် ။
:kiki : at 6/20/2009 01:00:00 AM
၆၄ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ဆုတောင်း ။ ။
စစ်မှန်သော ဒီမို ကရေစီ နှင့် တရားမျှတသော အုပ်ချုပ်မှု စနစ်ကို မျှော်လင့် တောင်းတ နေကြသော
မြန်မာပြည်သူ ပြည်သား အပေါင်းတို့ ၏ လေးစားထိုက်သူ ၊ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု ပိုင်ရှင် ၊ မတရားတဲ့ 
အမိန့် အာဏာ များဖြင့်၁၃ နှစ်ကျော် ထိန်းသိမ်း ဖမ်းချုပ်မှု အမျိုးစုံ ကို သတ္တိရှိစွာ ရင်ဆိုင်နေသော
သူရဲကောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ၆၄ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ ကျရောက်သည့်ယနေ့ ၁၉.၆.၂၀၀၉ နေ့ တွင်
အမေစု ကျန်းမာ ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ စေရန် နှင့် သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေရန် ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါသည် ။
မှတ်သားဘွယ်ရာ အဆို အမိန့် အချို့ ကို you tube မှ ပြန်လည် ကူးယူ တင်ပြ အပ်ပါသည် ။
:kiki : at 6/19/2009 01:00:00 AM
စားကြမယ်လား၊ ဒီ စားအုန်းဆီ များ....
ဟိုဟာ စားဖို့ မသင့် ဒီဟာ မစားရ ။ဒီပစ္စည်း အန္တရာယ် ဖြစ်တယ် ။ ဟို ပစ္စည်း အဆိပ် ပါတယ် .......
အမိ မြန်မာပြည် မှ ၅၅ သန်း နှီးပါးမျှ လူသားတွေ ထဲက ၅ သိန်း မျှသော လူလည်မသားတွေ ကို နှုတ်လိုက်ပြီး
ကျန်နေသော လူများဘာတွေစားလို့ဘယ်လို အသက်ရှင်နေရပါဦးမလည်း ။
ရှောင်လင်သိုင်းတတ် သူများက ရှောင်ရှားနိုင်ကြပေမဲ့ လူတိုင်းဟာ သိုင်းပညာရှင်တွေ မဟုတ်ကြတာမို့ 
မင်းတို့ ထိုက်နဲ့ မင်းတို့ ကံ ( ဟဲ ဟဲ သူ့ ကို သူ လူမင်း နတ်မင်း ထင်နေကြသူများ) လို့ ဘဲ မျက်စိမှိတ် နားပိတ်
မကောင်းသူထိပ် ၊ ကောင်းသူထိပ် ။ သတိလေးနဲ့နေကြ စားကြ ရအောင်လို့ဖတ်မိတာလေး ပြန် ဖေါက်သည်ချ ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဒီလိုပါ ...ဒီတခါတော့ စားသုံးဆီ အကြောင်း ။။။
ပြည်ပက စာအုန်းဆီကို ဦးပိုင်က တင်သွင်းတယ်၊ ရောင်းတဲ့သူတွေကလည်း ဆီမခဲအောင် ဆပ်ပြာမှုန့် ရောကြတယ်။
စားအုန်းဆီထဲတွင် ဆပ်ပြာမှုန့်တွေရောကာ မခဲအောင်လုပ်ပြီး ရောင်းချနေကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အီလန်ဆပ်ပြာမှုန့်က ဈေးပေါတော့ စားအုန်းဆီ တစ်ပီပါ (၄၂) ဂါလံကို အီလန်တစ်ထုပ် (၂၀၀ ဂရမ်) ထည့်တယ်လို့ ကြားရပါတယ်။
“ဆီကို ရေချိုး ဆေးရိုး မီးလှုံ ကောက်ရိုးတောင်လိုပုံ” ဆိုတဲ့ စကားပုံကို အမြတ်တနိုး ရွတ်တတ်တဲ့ ဗမာလူမျိုးဟာ ဆီစားကြတာ ကြမ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်တွင်းမှာ ဆီပေါလို့လားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မပေါတော့တာ ကြာလှပါပြီ။ ဒီစကားပုံက ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဖြစ်သွားပါပြီ။
မြန်မာတိုင်းမ်ရဲ့ အဆိုအရ ဗမာတယောက်ဟာ တနှစ်ကို စားသုံးဆီ (၅) ပိဿာနဲ့ (၄၉) ကျပ်သား စားသုံးပါတယ်။ လူဦးရေ (၅၂) သန်းနဲ့ တွက်မယ်ဆို တနှစ်ကို ပိဿာပေါင်း (၂၈၅) သန်း၊ တန်အားဖြင့် (၄) သိန်း စားသုံးပါတယ်။
ဆီအဖြစ် ပဲဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ စားအုန်းဆီတို့ကို အဓိက အသုံးပြုရာမှာ ပြည်တွင်းမှာ စားဆီ ၅၀%လောက်ပဲ ထွက်ပြီး ကျန်တဲ့တ၀က်ကို ပြည်ပက တင်သွင်းရပါတယ်။
အဓိက တင်သွင်းတဲ့ နိုင်ငံက မလေးရှားဖြစ်ပြီး သွင်းတဲ့ဆီအမျိုးအစားက စားအုန်းဆီ ဖြစ်ပါတယ်။ တနှစ်ကို တန်ချိန် (၂) သိန်း တင်သွင်းပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ တနင်္သာရီတိုင်းမှာ ဧက (၂) သိန်းလောက် စိုက်ဖို့ လျာထားတာ (၁) သိန်းလောက်ပဲ စိုက်နိုင်သေးတယ်လို့ ဆင်ဟွာသတင်းဌာနက ပြီးခဲ့တဲ့လက ရေးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာတိုင်းမ်က ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ဧက (၇) သောင်းလောက်ပဲ စိုက်နိုင်သေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာတိုင်းမ်အဆိုက အမှန်နဲ့ ပိုနီးစပ်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ (၁) ဧကကို (၂.၅) တန်ထွက်ရင် ဧက (၇) သောင်းကို တန်ချိန် (၁) သိန်း (၇) သောင်းခွဲ ထွက်ပါတယ်။ မလေးရှားက တနှစ်ကို စားအုန်းဆီ တန် (၂) သိန်း တင်သွင်းတယ်ဆိုတော့ ပြည်တွင်းမှာ စားအုန်းဆီ နှစ်စဉ် တန်ပေါင်း (၃) သိန်း (၇) သောင်းခွဲ စားနေပါတယ်။ ဆင်ဟွာက ပြောတာယူရင် နှစ်စဉ်စားတဲ့ဆီက စားအုန်းဆီချည်းပဲ တန် (၄) သိန်းခွဲ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
တနှစ်ကို စားအုန်းဆီ တန် (၃) သိန်း (၇) သောင်းခွဲ စားတယ်ဆိုတော့ လိုတဲ့ တန် (၂) သောင်းခွဲက ပဲဆီနဲ့ နှမ်းဆီဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ နေကြာဆီ နည်းနည်းပါနိုင်ပါတယ်။
ချုပ်လိုက်ရင် စားအုန်းဆီတွေ ပြည်တွင်းမှာ လှိုင်ဘောလယ်နေပါတယ်။ တန် (၃) သိန်း (၇) သောင်းခွဲကို လူဦးရေ (၅၂) သန်းနဲ့စားရင် လူတယောက်ဟာ တနှစ်ကို စားအုန်းဆီ (၅) ပိဿာနဲ့ (၁၅) ကျပ်သား စားသုံးပါတယ်။
စားအုန်းဆီက ဒီတိုင်းထားရင်း ခဲတယ် ဆိုတာ လူတော်တော်များများ သိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အခဲဖြစ်တဲ့ အပူချိန်က မြင့်ပါတယ်။ (၃၁) နဲ့ (၄၁) ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ကြားမှာ အခဲဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာပြည်မှာ အောက်ပြည်အောက်ရွာနဲ့ အညာမှာ တနှစ်လုံး ပျမ်းမျှအပူချိန်က (၃၀) ဒီဂရီနဲ့ အထက်မှာ ရှိတာဆိုတော့ စားအုန်းဆီခဲဖို့ လွယ်တဲ့နေရာပါ။
စားအုန်းဆီခဲရင် ပျော်သွားအောင် တနေ့ကို နည်းနည်းချင်းစီ အပူပေးရပါတယ်။ အပူသိပ်ပြင်းရင် ဆီထဲက အဆီတွေပျက်သွားလို့ အနံ့ဆိုးသွားပါတယ်။ ဒီတော့ စားအုန်းဆီကို ထိန်းသိမ်းရတာ ခက်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ရောင်းတဲ့လူတွေက အလွယ်လိုက်ပြီး အဆီတွေပျော်အောင် ဆပ်ပြာမှုန့်ရောလိုက်ပုံ ရပါတယ်။
ဆပ်ပြာမှုန့်သွေးလမ်းကြောင်းထဲရောက်သွားရင် သွေးထဲမှာ အက်ဆစ်ပမာဏများလာတာ၊ အစာလမ်းကြောင်းပေါက်ကုန်တာ၊ အသက်ရှုကျပ်တာ၊ သွေးဖိအားကျတာ၊ လည်ချောင်းယောင်လာတာ၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက အင်္ဂါတွေပျက်စီးတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
(၂၀၀၉) ခုနှစ် ဇွန်လ ကမ္ဘာ့စားအုန်းဆီပေါက်ဈေးနဲ့ တွက်မယ်ဆိုရင် စားအုန်းဆီ တစ်တန်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇၁၄) ဒေါ်လာ ပေါက်ပါတယ်။ ပိဿာနဲ့ပြန်တွက်မယ်ဆို တစ်ပိဿာကို (၉၉) ဆင့်ပဲ ကျပါတယ်။ တစ်ဒေါ်လာပဲ ထားပါတော့။ ဗမာငွေနဲ့ဆို ကျပ် (၁၁၀၀) မပြည့်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်မှာ စားအုန်းဆီ တပိဿာ ကျပ် (၂၁၀၀) ၊ မန္တလေးမှာ ကျပ် (၁၉၁၀) ၊ တောင်ကြီးမှာ ကျပ် (၂၁၀၀) နဲ့ စစ်တွေမှာ ကျပ် (၂၂၀၀) ပေါက်ပါတယ်။ စစ်တွေက လူတွေက စားအုန်းဆီကို ကမ္ဘာ့ပေါက်ဈေးထက် ၂ဆပိုပေးပြီး စားရပါတယ်။
စားအုန်းဆီကို မလေးရှားက သွင်းနေတာ ဦးပိုင်ကပါ။ လက်ကား၊ လက်လီအဆင့်ဆင့်ဖြတ်ပြီး တကယ်စားတဲ့လူဆီရောက်တော့ သွင်းဈေးရဲ့ နှစ်ဆဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဈေးကြီးတာက ထားတော့။ လူတွေ အဆိပ်သင့်အောင် ဘာဖြစ်လို့ ဆပ်ပြာမှုန့်တွေ ရောရတာပါလည်း။
စားသုံးသူက ဘာအခွင့်အရေးမှ မရှိတာ ကြာနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အသက်ကို အန္တရာယ်ပြုနေတဲ့လူတွေကို တရားစွဲလို့ရတဲ့ ဥပဒေရှိတာကို သုံးရမယ့် အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ တရုတ်ပြည်မှာတောင် နို့မှုန့်ထဲ မယ်လမင်းရောတဲ့လူတွေကို သေဒဏ်ပေးလိုက်ပါပြီ။
ဗမာပြည်မှာ စားသုံးသူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို တောင်းဆိုတဲ့ အဖွဲ့တွေရှိဖို့ လိုနေပါပြီ။ ဥပဒေပညာရှင်တွေ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ စားသုံးသူတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီး အစားအစာတွေကို အဆိပ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ လူတွေကို တရားစွဲရမယ့် အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ တနှစ်ကို အဆိပ်ရည် (၅) ပိဿာ သိသိကြီးနဲ့ တိုက်နေတာကို ချက်ချင်းရပ်သင့်ပါပြီ။
ကိုယ့်အသိတရားလေးတွေ နဲ့ ကိုယ် အသက်ကို ဥာဏ်စောင့်နိုင်ကြပါစေ ။
:kiki : at 6/18/2009 04:16:00 PM
ဝဋ်လိုက်တတ်တယ် ကိုကို သတိထား ။ ။ ။
ငရဲပြည် မှ နတ်ပြည်သို့သွားကြသူများ....
အသက်တချောင်း မသေကောင်းတာမို့ ....
ကံကြီးထိုက်မည့် သူများ ။ ။
နောင်လာမဲ့ အနှစ် နှစ်ဆယ် ..(အသစ် တဖန်)
ကလေးရယ် ခွေးရယ် လှောင်အိမ်ရယ်..
ဦးယက်တော သို့။။။
ဖါး ၊ ။
ခွေး ၊ ခွေးရူး နှင့် ခွေးရူးပြန်ခြင်း ၊။